Qaladaadka Ragga ka dhaca xiliga sariirta Dumarkana Ay Unecban yihiin Aqriso - iftineducation.com
Qaladaadka Ragga ka dhaca xiliga sariirta Dumarkana Ay Unecban yihiin Aqriso
aadan21 / January 5, 2017
iftineducation.com – Ninyahoow hadii aad dooneyso in lamaantaada ku farxad giliso dhanka kulanka sariirta ka fogaaw in aad qaladaadkaan gasho xiliga ciyaarta .
Qaladaadkaan rag badan ayay ka dhacaan iyaga oo aan dareensaneen halista ay leedahay , waxa ayna haweeneyda ku qasbeysa in aysan helin wax maacaan raaxo la yiraahdo .
Dhunkanshada dabaalnimada ah: Inta bada ragga kuma xariifsana farsamada dhunkashada mana garanayaan sida cadaadiska u saarayaan labada bishin iyo xiliga dhunkashada macaanka tahay iyo waliba xiliga carabka loo adeegsado dhunkashada.
Ogaaw haweenka aad ayay u neceb yihiin ragga aan ku wanagsaneyn farsamada dhunkashada
In Aad Ku Deg Degto Salaaxidda: Haweenka waxa tani ku beereysa wel wel iyo cariiri halkii ay raaxeysan lahaayeen haddii uu ninka ku deg dego ku cayaaridda naasaheeda .
In aadan iska soo xiirin tinta hoose(bisiqa): Ragga qaarkii oo doqomo ah ayaa u maleeya in tintaas marka jirka haweenka taabtaan in gabadhu kacsi ka heleyso waxaase xaqiiqda tahay in uu keeno xasaasiyad ee ninyahoow isaga dadaal nadaafada .
Ninka Wasaqlaha Ah: Ninayoow guud ahaan nadaafada iska sax , iska daayee in raaxo ay ka hesho lamaantaada ee waxa ay qarka u saarmeysa in guud ahaan ka cararto.
Ogaaw haweenka ma jecla in naasaha looga dhawaado illaa ay ka kacsadaan taasina inta badan wax ay qaadataa 7 -10 daqiiqo.
Ninka Maqane Joogaha Ah: aad ayay haweenka u neceb yihiin ninka maqane joogaha ah iyadoo kulanka sariirto lagu jiro kaasi oo niyad ahaan maqan oo ka fekaraya cidda qaadeyso horyaalka ingiriiska Man United iyo City ama masquul ku ah arimo kale .
Qabashada Taleefanka: waa ninka ay ugu neceb yihiin haweenka ee xiliga ciyaarta qabta taleefan u soo dhacay oo joojiya jugta , war ninyahoow doqonka ah marka kulanka macaan la galeyso macaantaada iska dami telka .
In naaska looga jaqo sida cunug yar u jaqo: Haweenka waa neceb yihiin ragga sidaas sameeya , waxaa haboon in ninka naaska shumiyo carabkiisana ku dal daliigo in yarna bishimaha ku dhajiyo ibta naasaha , laakiin ha nuugin sida cunuga yar oo kale .
In Dhagta Laga Qaniino: Ragga qaarkii oo doqomo ah ayaa mooda in haweeneyda oo laga qaniina dhagta ay haweeneyda ku soo kacsaneyso oo ay ku dareemeyso kacsi laba jibaaran , balse xaqiiqda waxa ay tahay in marnaba jirin haween ku kacsada qaniinyada dhagta balse waxakaliya ay ka helaan waxa ay tahay in carabka laga soo mariyo dhuunta iyo dhagta .
In aad ka wareegto goob ay jeceshahay: haweenka mararka qaar goobo gaar ah ayay raaxo ka dareemaan waxaana suuragal in raaxada aad ka dareento wajigeeda halkii aad ku sii wadi laheyd ayaad hab kale u wareegysa taasina madax wareer ay ka qaadeysa ee isha ku haay oo la soco qaabka ay u macaansaneyso xiliga kal baxa .
In bilaa codsi malabyarowga u giliso: haweenka waa neceb yihiin ninka kula deg dego gilinta malabyarowga iyadoo uusan u sheegin ama ka codsan , ninyahoow marka baashaal macaan sameyo u sheeg lamantaada in aad rabto in aad weerarto balse kedis ha uga dhigin .
In aad ka codsato habab adag: War ninyahoow doqonka ah lamanataada ma ah haweeney cayaarto ciyaarta dumestikada , waxaadna u haysataa in lamaantaada jirkeeda caag oo habkii la doono laga yeelan karo ee war ninayahoow haku qasabin saaxibtaada hab aysan galmada u sameeyn karin .
Maku aragtay Xishood Nuucaan ah -Haka Harin Weligaa kacsiyaa haayo